Fiarandalamby any amin'ny Faritra Scottish
Tari-dalana mamakivaky any amin'ny Faritra Scottish
voasoratra ao 14 Novambra 2014 . Posted in Activities
Fiarandalamby any amin'ny faritra avoMaro ireo klioban'ny bisikilety ao an-toerana sy ireo vondrona fampielezan-kevitra maromaro any Ecosse sy ny sisa any Angletera. Ny CTC dia ny vatana iray izay mirakitra ny fampiasana fiaramanidina sy tombontsoa isan-karazany.
Torohevitra momba ny bisikileta amin'ny làlana mamonjy fiara mamaky safidy Manaraka ny lalam-barotra Highway - aza mitsambikina ny jiro mena ary aza mandeha amin'ny làlam-piaramanidina raha tsy hoe lalana lalovan'ny toetr'andro; Amin'ny toetr'andro mafana dia mety ho malamalama ny hafainganam-pandehanao raha toa ka mety hijanona ianao; Miverimberina tsara, miorina tsara ary mazava tsara amin'ny banga; Hevero ny fiarovan-doha; Arovy ny bisikiletanao.
Ataovy azo antoka fa afaka mahita anao ny fiara mandeha amin'ny toerana izay ahitanao sy hita; Ampiasao ny jiro ary eritrereto ny fitafiana mamirapiratra na mandanjalanja, indrindra any amin'ny tanàna, amin'ny alina sy amin'ny toetrandro ratsy; Ataovy ny fifandraisana amin'ny hafa amin'ny mpampita vaovao, indrindra amin'ny fifangaroan-tserasera, dia fantatrao fa efa nahita anao ry zareo; Famantarana mazava tsara amin'ny fotoana rehetra; Ampiasao ny lakolosy - tsy ny mpandeha an-tongotra rehetra no afaka mahita anao mahafantatra ny fiara Maro ny fifandonana mitranga rehefa misy mpitaingina bisikileta ao anatin'ny fiara iray izay miankavia miankavia. Aza mieritreritra fa ny fiara dia mandroso mialoha, satria fotsiny hoe tsy midika izany fa havaozina. Alaharo foana ny fiasan 'ny fiara rehetra eto amin'ity toe-javatra ity - tsara kokoa ny manantona azy mandra-pialan'ilay fiara. Toro-hevitra ho an'ireo mpitondra fiara Mba hahatonga ny lalana ho azo antoka ho azy ireo, mila mahatsikaritra ireo mpitaingina bisikileta ihany koa ny mpitaingina bisikileta: Rehefa miara-mijery ny mpitaingina bisikileta manatona ny akaiky anao ianao ary tsy manapaka azy; Omeo toeram-pivarotana lehibe ny mpitaingina bisikileta rehefa tafasaraka;
Amin'ny alina, atsobonareo ny lanjanao rehefa manatona mpitaingina bisikileta; Amin'ny toetr'andro mafana, avelao hivoatra ny mpitaingina bisikileta raha toa ka mety ho marefo ny rindrina. Tadidio fa ireo mpitaingina bisikileta sy mpitondra fiara dia mitovy zo amin'ny fampiasana sy hizarana ny làlana mitovy. Ny fanajana ireo mpiserasera rehetra dia manampy ny tsirairay handray soa amin'ny dia an-dalambe. Raha mila fanazavana bebe kokoa dia alefaso any amin'ny https://www.gov.uk/browse/driving/highway-code FOMBA FIASA TSARA
Callander dia mipetraka eo amin'ny sisiny atsinanan'ny valan-javaboahary Loch Lomond sy Trossachs ary tsara toerana ho an'ny Lochs & Glens any Ekosy. Fantaro ny faritra mahafinaritra any amin'ny faritra andrefan'i Ekosy any avaratr'i West Highland Way. Ny tendrombohitra avo be, ny rivotra mangatsiatsiaka sy ny renirano mikoriana dia manome valisoa ho anao amin'ny karazan-javamia iray tsy manam-paharoa sy miova rehefa mandeha miala 96 kilaometatra avy any Milngavie (Glasgow) mankany Fort William ianao, manolotra fandriana sy misakafo eny an-dalana, hahita ireo tranokely mahatsiravina, , bala majestic fanatanjahan-tena avy any Fort William mankany Inverness, nandehandeha namakivaky ny toerana mahafinaritra indrindra isan-karazany isan'andro ary naka ny toeram-pitsaboana goavana tany amin'ny Bed and Breakfast maro be tamin'ny alina, tamin'ny alàlan'ny Rannoch Moor, Kinlochleven tamin'ny alàlan'ny "ala misy ny Devoly, Ben Nevis sy Fort William, renivohitra ivelan'i Ekosy eo an-tampon'i Loch Linnhe.
Cycle amin'ny alàlan'ny tontolon'ny lochs sy glens izay mamorona ny National Park Loch Lomond & Trossachs sy Highland Perthshire. Fantaro ny Ecosse rehefa mamakivaky ny valan-javaboary Cairngorms ianao. Toeram-ponenana manan-tantara, trano fialofana manan-tantara, Speyside malaza whiskeys, toeram-piompiana bitika Jacobite, Mba ho milamina sy mahafinaritra mahalaza tsara kokoa ny mijery ny fijerin'ny ambanivohitra manodidina an'i Loch Ness, maka bisikileta.
Ny faritra Loch Ness dia manolotra toerana malalaka maro avy amin'ireo lalan-kely mampihetsi-po ao amin'ny lakandranon'i Calédonian ho an'ny fanamby, lavitra, lavitra eny an-dalana toy ny Great Glen Way. Ny lalana mangina ao Strathnairn sy ny faritra atsimon'ny loch dia tsara ho an'ny mpitaingina bisikileta ary misy koa ny fiaramanidina goavam-be tsara. Ny faritra Strathglass dia manolotra traikefa amin'ny bisikileta mitaingina bisikileta na aiza na aiza ao amin'ny firenena. Ny araben'ny faritra dia avy any Beauly sy Loch Ness, manolotra ala mandehandeha eny an-dalambe, manomboka any amin'ny telo mampiavaka ny Glens of Affric, Cannich sy Strathfarrer. Ny hantsana ambany kokoa ao Glen Cannich dia mivoatra manakaiky ny tanànan'i Cannich, ary ny fiakarana fohy, nefa mahavariana dia ahafahana miditra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny ala, izay miaraka amin'ny sasany mitaingina ny lalana mihodina Mullardoch, hitondra anao any Loch Mullardoch, 9 kilaometatra lavitra.
Tena fahitana mahatalanjona izany, voahodidina tendrombohitra avo. Ny fiakaranana mankany Glen Cannich dia azo antoka fa ny lalana dia mangina ary ny fiverenana, eny rehetra eny! Glen Affric, afaka manatona amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny làlana aleha avy any Cannich sy Tomich, hijanona eo amoron'ny Loch Beinn 'Mheadhoin, ranom-pitaovana mivaingana. Ny morontsiraka atsimo amin'i Tomich sy Cannich, any Corrimony na mankany Glenmoriston, dia fialantsasatra lavitra tsy misy azy io, Fialan-tsasatra tena tsara Ny lalana avy any amin'ny Dog Falls ka hatrany Knockfin dia mahavariana, raha mbola mitodika any Tomich ianao, na mety avy amin'i Loch Affric mankany Tomich, avy amin'ny toeran'i West Guisachan, Cougie sy Plodda. Afaka manohy izany hatrany ianao, afaka manohy ny morontsiraka ambany any atsimon'i Tomich sy Cannich, ho any Corrimony na hatrany Glenmoriston, Ny toerana tsara hialana amin'ny Bed and Breakfasts dia ny Country Inn izay mitàna fiara tsy mitongilana sy famahanana famantaranandro, enina kilaometatra ho ny fanombohan'ny lolo sy ny lozan-tsiriny hafa eto amin'ity faritra ity, sakafo mahasalama tsara sy mahavelona any an-toerana, ary ny labiera ary ny mamarana ny hariva alohan'ny fandriana, maraina ny sakafo matsiro marokoroko tsara indrindra izay mitazona anao ny andro rehetra The Highland Glen Steading Lodge
Fantaro ireo tendrombohitra, lochs ary morontsiraka amoron-dranomasin'ny Nosy Skye rehefa mandalo ny halavany sy ny halavan'io nosy mahazendana feno zavaboary an-dranomasina sy ireo tora-pasika miafina any an'ala izay milamina, toerana tsy misy azonao atao ny mandany fotoana tena tsara. Ny morontsiraky ny morontsirak'i Islay dia Arran tsara tarehy, Islay sy Jura dia toerana miavaka hialana amin'ny manodidina, ary manome heviny vaovao ho an'ny hipetrahan'ny nosy. Ny làlana manodidina ireo nosy dia any an-tany lavitra ka mahatonga azy ho tena tsara, tsy hohadinoina ny traikefa. Ny hopping an-dranomasina dia tsara indrindra amin'ny seranana sy seranana tsara tarehy izay mitondra anao any amin'ny toerana vaovao, manolotra fandriana sy sakafo maraina ho an'ny mpandeha mandry mandry ny alina.
Ity dia nofy nofinofy ho an'ny Whisky, miaraka amin'ireo valam-panafody valo amin'ireo nosy ireo ary koa pubs sy trano fandraisam-bahiny maro be! Ny tanàna rehetra any amin'ireo nosy dia tena mahafinaritra tokoa ary ny whiskeys dia mamy tsara ny fanandramana, indrindra aorian'ny andro fiakarana an-dàlana, ny zotra mankany amin'ny avaratr'i Scotland dia midika hoe mahita morontsôkôlà izay mahatalanjona fotsiny.
Ny fiaramanidina manodidina ny Dunnet Head dia mamakivaky ala sy saha tsara tarehy manamoroka tavy sy fahitana mahafinaritra amin'ireo nosy izay tsy misy na inona na inona. Misy toerana mahafinaritra mahazatra ny mijanona miaraka amin'ny safidin'ny fianakaviana kely misy fianakaviana sy fialofana, trano fialan-tsasatra toy ny toy ny hotely izay manana toetra mampiavaka azy ireo. Hahazo fifaliana miadana ianao na aiza na aiza hijanonanao any Scotland ary hahita ihany koa fa ny ankamaroan'ny toerana dia manolotra tahiry azo antoka ho an'ny bisikiletanao.
Soraty ny fandinihana voalohany!
Torolalana momba ny fampahalalam-baovao Fort William Visitor
Ny National Museum of Scotland (Edinburgh) Guide
Ny Torolàlana momba ny Visitor Information Visitor à Aberdeenshire
Ny Torolàlana ho an'ny mpizaha tany ao amin'ny Wick Center
Torolalana ho an'ny fandehanana any amin'ny Faritra Scottish